कात्तिक १७ गतेको त्यो निर्णय, जसले इटहरी क्षेत्रको सडक साँघुरो बनायो: को–को हुन हस्तक्षरकर्ता ?
२२८९ पटक पढिएको
इटहरीः गत कार्त्तिक १७ गते रानी–धरान ६ लेन सडक अन्तर्गतको इटहरी– तरहरा खण्डमा बाटो चौडाको विषयमा एउटा निर्णय भयो । त्यो दिन जुन निर्णय भयो लामो समय स्थगित भएको इटहरी क्षेत्रको बाटो विस्तारको कामले गति पायो । तर, गति त पायो बाटो चौडा हुनेगरि ।
यहाँ मूल सडक क्षेत्रको जमिन ५० मिटर चौडा हो । सडकको बिच भागबाट दायाँबायाँ २५, २५ मिटर कायम हुनेगरि सडक विभागको जमिन छ । जहाँ ५, ५ मिटर क्षेत्रफलमा भने सडकको जमिन मिचेर ठुलठुला घर र सपिङ मल बनाइएको छ । अहिले तिनै भवन जोगाउन जम्मा ४० मिटर क्षेत्रफलमा मात्र सडक बनाइँदै छ । बाँकी १० मिटर भने छाडिएको छ । ४० मिटरमा सडक त बन्न, तर बटुवा कहाँबाट हिँड्ने ? स्थानीयको प्रश्न छ ।
इटहरीमा पछिल्लो समय विवाद भएको कारण नै यही हो । योजनाका इन्जिनियरले भने सडक बन्ने डिपिआर नै ४० मिटरको भनेका छन् । तर, इटहरी चौक देखि आर्मी क्यामसम्म ४० मिटर हुने र आर्मी क्याम देखि तरहरासम्म चाहिँ किन ५० मिटर हुने ? यही प्रश्न लिएर इटहरीका सक्रिय युवा होमनाथ धमला, सुनिल कार्की, नवराज सुवेदीहरूको टोली सरोकारवालासमक्ष पुगिरहेको छ ।
को–को लागे त यो बाटो साँघुरो बनाउने खेलमा ?
प्रदेश पोर्टललाई प्राप्त डकुमेन्टमा भने इटहरीबाट निर्वाचित जन प्रतिनिधि नै सामेल भएको प्रस्ट देखिन्छ । जसमा नेकपा सम्बद्ध २ र काँग्रेस सम्बद्ध १ जन प्रतिनिधि छन् ।
इटहरी ४ बाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद भट्टराई, ६ नम्बर वडाध्यक्ष दीपक गौतम र ९ नम्बर वडा अध्यक्ष भूपेन्द्र बराल छन् । जसमध्ये गौतम काँग्रेस निकट हुन भने भट्टराई र बराल पूर्व एमाले निकट नेकपा सम्बद्ध हुन् ।
उनीहरूले हस्ताक्षर गरेको सहमति पत्रमा भने ५ नम्बर बुँदामा सहमति गरिएको छ । जहाँ भनिएको छ ‘इटहरी चौक देखि आर्मी पृतनासम्म जम्मा ६५ फिट भित्रबाटो, नाला कायम गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने ।’
सहमतीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने उद्याेग वाणिज्य सँघ इटहरीका अध्यक्ष भिम बहादुर पाैडेल पनि छन् । उनि लगाएत निर्माण कम्पनीका विभिन्न व्यक्ती र इन्जिनियरहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।